Shirkadda Spotify oo Bilowday Qalabkeedii ugu horreeyay ee Gawaarida: Waxyaabaha Baabuurta | Wararka IPhone
Spotify Waxay Bilaabaysaa Qalabkeeda Ugu Horeeya ee Gawaarida: Waxyaabaha Gawaarida
Qiyaastii 3 sano ka hor, warar xan ah oo kala duwan ayaa tilmaamay in Spotify uu ka shaqeynayay qalab loogu talagalay gaariga kaas oo u oggolaan doona dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​dhammaan waxyaabaha laga heli karo barxadda iyadoon loo isticmaalin taleefannada casriga ah, tan iyo waxaa ku jiri lahaa isku xirnaanta 4G.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in fikraddan la tuuray, halkii si buuxda loo dhisay. Shirkadda Iswiidhishka ee qulqulka muusigga ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Car Thing, oo ah aaladdii ugu horreysay ee qalabka qalabka loogu talagalay in loo isticmaalo gawaarida.
Sida laga soo xigtay shirkadda, sheygan waxaa loogu talagalay macaamiisha doonaya khibrad dhageysi ee gaariga "Dareere badan oo shakhsi ahaaneed".
Khibrad loogu talagalay badanaa gawaarida tirada badan ee la jaan qaadi karin nidaamyada macluumaadka casriga ah iyo madadaalada ay maamusho CarPlay iyo Android Auto badanaa.
Qalabkan waxaa loogu talagalay macaamiisha barnaamijka, wuxuu leeyahay a shaashadda taabashada, suufka maraakiibta, shaqooyinka xakamaynta codka iyo afar badhan in adeegsaduhu u habeyn karo inuu la jaanqaado baahidooda sida muusikada aad u jeceshahay, Podcast, playlist ...
Isku xirnaanta adeegsadaha waxaa ku dhiirrigeliyay nooca mobilada si ay uga dhigto mid la yaqaan dadka isticmaala. Wax Baabuur fWuxuu kuxiraa Bluetooth-ka ama AUX ama USB cable oo ay ku jiraan noocyo badan oo qaansooyin ah oo ku habboon dhammaan noocyada kala-goysyada dashboardka.
Spotify waxay u dirtaa qalabkan lacag la’aan tiro yar oo isticmaaleyaal ah, kuwaas oo kaliya u baahnaan doona bixiso kharashka dhoofinta.
Goorma ayaa si rasmi ah loo iibinayaa, waxaa lagu qiimayn doonaa $ 79,99In kasta oo xilligan aan la ogeyn inta ganacsigeeda la qorsheynayo iyo haddii ay sidaas ku sameyn doonto isla waqtigaas adduunka oo dhan ama marka horeba Mareykanka si ay ugu yaraan ugu faafaan adduunka intiisa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Spotify Waxay Bilaabaysaa Qalabkeeda Ugu Horeeya ee Gawaarida: Waxyaabaha Gawaarida
Filimka Animated Wolfwalkers ayaa ku guuleystay 5 Annie Awards
Apple waxay si otomaatig ah u cusbooneysiineysaa barnaamijyadi hore iyadoo ay la socoto shahaadadii ugu dambeysay ee saxiixa